Agaasimihii Madaxtooyada Maamulka 'Puntland' oo iscasilay iyo Warar Sheegaya in Dekadda Boosaaso Lagu Wareejinayo Dowladda Imaaraadka WARBIXIN.
Sunday February 26, 2017 - 09:38:52 in Wararka by Super Admin
ismariwaa midkii ugu xooganaa ayaa soo kala dhaxgalay mas'uuliyiinta maamulka isku magacaabay Puntland ee kajira deegaanada dhaca waqooyi Bari Soomaaliya.
Sawirka magaalada Garoowe
Wararka ka imaanaya magaalooyinka Boosaaso iyo Garoowe ayaa sheegaya in khilaaf u dhaxeeyo Cabdi Wali Gaas iyo saraakiil hoosaadyada maamulka uu soo ifbaxay.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in khilaafku uu salka ku haayo dil jamaaci ah oo maamulka Puntland la damacsanyahay in uu ku fuliyo dhalinyaro ku xiran xabsiyada kuwaasi oo maalmo ka hor ay maxkamad melleteri ku xukuntay dilal.
Nin lagu magacaabo Deeq Saleebaan Yuusuf oo ahaa agaasimaha madaxtooyada maamulka Puntland ayaa shalay ku dhawaaqay in uu iska casilay xilkii uu hayay.
iscasilaadda sarkaalkan ayaa timid kadib khilaaf darran soo kala dhaxgalay isaga iyo Gaas, siyaasiyiin ayaa sheegay in Deeq Saleebaan ay isku dhowaayeen Gaas balse ay isku qabteen xukunada dilalka ah oo ay fulisay maxkamadda maamulkaasi.
Warar kale ayaa iyana sheegaya in guddoomiyaha gobolka Bari iyo ku xigeenkiisa ay kasoo horjeesteen soo jeedin katimid Cabdi Wali Gaas oo aheyd in dekadda Boosaaso lagu wareejiyo shirkad laga leeyahay wadanka Imaaraadka Carabta.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in magaalada Boosaaso ay ka socdaan kulamo aan loo kala kicin oo looga arrinsanayo sida laga yeelayo qorshaha halista ah ee Marsada Boosaaso loogu wareejinayo Imaaraadka Carabta.
Ganacsatada iyo waxgaradka Boosaaso ayaa diidmo adag kala kulmay soo jeedinta Gaas ee ah in la wareejiyo Dekadda ugu weyn gobolka Bari.
Dhinaca kale ciidamada maamulka ‘Puntland’ ayaa xabsiga dhigay Nabadoon Cabdi Risaaq Xarago kadib markii uu warbaahinta ka sheegay in jirdil lagula kacay maxaabiis ku xiran xabsiga Boosaaso.
Ehellada Nabadoonka ayaa sheegay in ciidamada Puntland ay Cabdi Risaaq Xarago ka kaxaysteen deegaanka Waaciye illaa iyo haddana lama oga halka loola dhaqaaqay.
Afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka Bari ayaa wareysi uu shalay siiyay Idaacadda Codka Mareykanka wuxuu uga hadlay dambiyada been abuurka ah ee lagusoo oogay 7 dhalinyara ah oo Maxkamad ku xukuntay dil.
Saraakiil katirsan maamulka dabadhilifka Puntland ayaa sidii caadada u aheyd waxay Nabadoonka ku tiimbareeyeen in uu kamid yahay wax ay ugu yeereen ‘Argagaxiso’!
Maamulka SomaliMeMo Oo Muslimiinta Ugu Hambalyaynaya Munaasabadda Ciidul Fidriga.